WhatsApp ကိုဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်ပြည်သူ့ Chat
+ 66 946 357 637 (chat ကိုသွားအရေအတွက်ရန်နှိပ်ပါ)
စတိဗ် ဧပြီလ 16, 2019
1 ။ ဘန်ကောက်မှာတော့ကျနော်တို့အတွက်ငွေသား3နာရီနှင့်ငွေပေးချေမှုသင်၏အထဲမှာကြီးထွားဟော်မုန်းအမိန့်ကယ်မနှုတ်နိုင်ထိုင်းနိုင်ငံ, အခြားမြို့များမှဥပမာဖူးခက်ပေးပို့ 12-24 နာရီကြာ
2 ။ ကျနော်တို့အကောက်ခွန်၏ကျမ်းပိုဒ်, ကြီးထွားဟော်မုန်းသငျ့အိမျတံခါးဝအကာအကွယ် thermo-ထုပ်ပိုးအတွက်ကိုအပ်သည်သြစတြေးလျမှလုံခြုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးပို့အာမခံသို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့ဖို့ပိုက်ဆံပြန်အမ်းလိမ့်မယ်
ဇန်နဝါရီ မတ်လ 30, 2018
ငါ2မေးခွန်းများ
1 / ငါထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာ. အဲဒီမှာတက်ကောက်ဖို့စုစည်းဖို့ဖြစ်နိုင်လျှင်ကိုယ့်ကိုကျော်လာသောအခါအံ့သြနေပါတယ်သည့်အခါ HGH ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာနေပါတယ် ???? ကိုယ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်မှာကောင်လေးအမိန့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ငွေသားပေးချေကိုဖတ်ခြင်းနှင့် 8 နာရီအတွင်းခဲ့
လိုင်းရာသီဥတုပေါ်မှာကြောင့်ဒါဟာပျက်စီးလွယ်ပြည်နယ်မှဝယ်သြစတြေးလျအတွက်ဝတ်စုံအဖြစ်ထုတ်ကုန်၏သမာဓိသိမ်းဆည်းရမိမည်မဟုတ်ပါအလို့ငှာလျှင်2/ ကျွန်မသံသယဖြစ်၏။
အမှတ် မတ်လ 30, 2018
Bon_Bunny ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2018
သင့်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းနှင့်အတူအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှု, ဇန်နဝါရီလ 15th အပေါ်မှာငါ့အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Earl ဇန်နဝါရီလ 22, 2018